Thenga i-Tadalafil powder (171596-29-5) -Manufacturer & fektri
Isilinganiselwa: SKU: 171596-29-5. Isigaba: Ukuya ocansini kuthuthukisa amaHormoni
I-Tadalafil powder, i-tadalafil eluhlaza, iyinhlobo ye-powder emhlophe, ngokuvamile yayisetshenziselwa ukwenza amaphilisi e-tadalafil. Isidakamizwa seTadalafil, i-aslo ebizwa / i-Cialis, ingenye yezidakamizwa ezibizwa ngokuthi i-PDE-5 (i-Phosphodiesterase type 5) inhibitors.
I-AASraw inokukwazi ukuhlanganisa nokukhiqiza ikhono kusuka kugremu kuya ku-mass (ye-Raw Tadalafil (Cialis) powder (i-171596-29-5)), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
I-Raw Tadalafil powder (i-Cialis powder) ividiyo
I-tadalafil emnyama (Cialis) powder Izinhlamvu eziyisisekelo
Igama: I-Tadalafil (Cialis) powder
Formula Yamamolekhula: C22H19N3O4
I-Melt Point: I-298-300 ° C
Isitoreji Sokugcina: I-20ºC
Umbala: White Powder
I-1.AASraw inikeza i-Raw Tadalafil powder (i-Cialis powder), okungenzeka't kutholakala ngezindlela eziningi ezivamile.
I-2.AASraw inikeza zokupheka okuningiliziwe kanye nomhlahlandlela wokukhiqizwa kwezimpahla ezingatholakali (I-Cialis powder) Tadalafil powder.
Kuyini iTadalafil powder
I-Tadalafil powder, impahla eluhlaza ye-tadalafil, uhlobo lwe-powder emhlophe, imvamisa yayisetshenziselwa ukwenza amaphilisi e-tadalafil. Isidakamizwa seTadalafil, i-aslo esibizwa / i-Cialis, singesinye sezidakamizwa ezaziwa nge-PDE-5 (Phosphodiesterase type 5) inhibitors. Ukuya ocansini okwandisa iTadalafil / Cialis kuyayekethisa imisipha yemithambo yegazi futhi kwandise ukugeleza kwegazi liye ezindaweni ezithile zomzimba. I-Tadalafil / i-Cialis kanye nezinye i-PDE-5 inhibitors zingasiza amadoda ane-erectile dysfunction (ED) ngokwenza ngcono impendulo ye-erectile lapho indoda ivuselelwa ngokocansi. Isetshenziselwa ukwelapha ukungasebenzi kahle kwe-erectile (ukungabi namandla) nezimpawu ze-benign prostatic hypertrophy (i-prostate ekhulisiwe). Abantu bavame ukuthenga i-tadalafil powder kusuka ekuhlanzeni okuphezulu umthengisi we-tadalafil powder. Ngaphandle kweTadalafil / Cialis, ezinye izidakamizwa kuleli klasi yiViagra (Sildenafil) neLevitra (Vardenafil), neFlibanserin.
I-tadalafil powder isebenza kanjani
I-PDE5 iyi-enzyme etholakala emadodeni amaningi ahlukumezekayo nge-erectile. Iphazamisa enye into ebaluleke kakhulu - cGMP, noma i-cyclic guanosine monophosphate, okuyingxenye ebalulekile ekwakheni ukulungiswa okunempilo. Ngenxa ye-cGMP izibonakaliso ezivela ekugcineni kwezinzwa esifundeni sakho sezintambo ziqala ukukhululwa kwe-nitric oxide, okusho ukuthi, ivuselela imisipha ebushelelezi efaka imithwalo yegazi ku-pelvis yakho. Njengomphumela, igazi elingaphezulu lingadlulela kuzo, ukugcwalisa izakhiwo ze-cavernous emzimbeni we-penis yakho, okwenza kube nzima futhi kuhlanganiswe. Uma kukhona i-PDE5 kakhulu futhi engekho ngokwanele i-cGMP, umzimba wakho awukwazi nje ukucacisa izibonakaliso ezivela ekupheleni kwezinzwa zakho, okuholela ekutheni okuphelele noma okuncane ukukwazi ukuthola ukulungiswa.
Uma uthatha i-36-hour Cialis / tadalafil powder, kunciphisa umphumela we-PDE5 ohlelweni lwakho ngokusheshisa, okwenza ukuhlushwa kwe-cGMP kubuyele emazingeni ajwayelekile ngendlela emfushane njengemizuzu ye-15-45. Kodwa-ke, njengoba ingxenye yokuphila kweTadalafil isifushane, umphumela wayo uyaphela phakathi nezinsuku ze-2 okwenza i-PDE5 ibuye futhi impilo yakho yobulili - iba yimbi kakhulu. Ngokuphambene nalokho, uma uthatha i-Cialis / tadalafil powder ephansi-nsuku zonke, kusiza ukugcina amazinga aphilile we-cGMP emzimbeni wakho, ikunikeze ithuba elilindelwe isikhathi eside ukujabulela ubulili futhi. Kuthatha izinsuku ezimbalwa ze-Cialis 4-5 ukuze ziqale ukusebenza, ngakho ungalindeli ukuphenduka umlenze wangempela ngemva kokuthatha iphilisi yokuqala. Kodwa-ke, ingxenye enhle ukuthi ngeke uphinde uhlangabezane nobunzima embhedeni - uma nje uqhubeka uthatha i-Cialis / tadalafil powder nsuku zonke.
Ungathatha kanjani i-tadalafil powder ngendlela efanele
Amapayipi ama-tadalafil amaqabunga ngokuyinhloko afika emakethe ngezinhlobo zamaphilisi e-tadalafil; ama-capsules, Uma unquma ukuthatha i-tadalafil, i-yuou kufanele ilungise umthamo ngokusho kwesidingo sakho.
Kubantu abaningi, i-tadalafil yokunconywa yokuqala yokunconywa yi-10 mg ngosuku, ngokuvamile ithathwe ama-30minutes ngaphambi kokusebenza kocansi (tadalafil ukuze isetshenziswe njengoba kudingeka). Ngokuya ngokwanele kwempendulo noma imiphumela emibi, umthamo unganyuswa ube yi-20 mg noma wehla ku-5 mg ngosuku. Umphumela we-tadalafil ungaphelela kumahora we-36. Abantu abaphuza imithi yokwandisa amazinga wegazi we-tadalafil akumele kudlule inani elilodwa lama-10 mg kumahora angu-72 (Bheka ukusebenzisana kwezidakamizwa). Ukusetshenziswa kanye kwansuku zonke ngaphandle kokubheka umsebenzi wocansi umthamo onconyiwe ngu-2.5 ku-5 mg nsuku zonke. I-Tadalafil akufanele ithathwe izikhathi ezingaphezu kwesisodwa nsuku zonke.
Inothi Elibalulekile: I-Cialis akufanele ithathwe ngama-nitrate ngenxa yekhono layo lokwehlisa umfutho wegazi. Ama-nitrate akufanele athathwe okungenani amahora angama-48 ngaphambi kokusetshenziswa kwe-Cialis nabasebenzisi abaningi be-nitrate abadinga ukugwema lokhu nawo wonke ama-PED5.
Isicelo se-Tadalafil powder sokudayiswa
Esitolo sezidakamizwa sendawo, noma esibhedlela, singabona kalula i-cialis, eyi-tadalafil. Yebo. :
Tadalafil powder for Candy ngocansi
I-Tadalafil ingangezwa kuma-candies ukwenza amaswidi ajwayelekile ukukhulisa izidingo zabesilisa zocansi. Kunezinhlobo eziningi kakhulu zamaswidi ezocansi eMalaysia, izithako eziyinhloko imvamisa i-tadalafil powder, ne-sildenafil powder.
Tadalafil powder for ikhofi yocansi
Emakethe, kunezinhlobo ezithile zekhofi yobulili. Izithako ngokuvamile ziyi: Ukotini Ubisi, Uju, I-Cinnamon, Ukhokho, i-Maca.Ikhofi ephuzile-uhlobo lwesiphuzo ne-Aztec ephikisayo. I-flavour i-spicy kancane, kodwa iyamnandi ngokwanele ukukhenela kumanqamu omnandi kunoma ubani. Ikhofi yezocansi inezithako zokuthuthukisa i-libido yakho ngokuphumelelayo. I-Maca, i-Koco, i-Cinnamon, i-Honey kanye neCoconut Ubisi ngokuhlanganyela kusiza ekukhuliseni ukukhiqizwa kwe-hormone, ukuthuthukisa ikhwalithi yezimvini, ukubambezeleka kokuya esikhathini, ishukela egazini eliphansi, ukuthuthukisa ukuqina nokuthuthukisa ubulili.
Kithina, kwesinye isikhathi ukuze sibe nemiphumela enamandla noma imiphumela ebuthakathaka, singenza ikhofi locansi ngokungeza ucansi oluthuthukisa i-powder tadalafil, ngokwesidingo seklayenti lokwenza imiphumela ehlukile yekhofi.
Indlela yokuthenga i-Tadalafil powder; Thenga i-Cialis powder kusuka ku-AASraw
1.Ukuxhumana nathi nge-imeyili yethu uhlelo lokubuza, noma i-skype eku-inthanethi ummeleli wenkonzo yamakhasimende (CSR).